Harry Kane oo si weyn ugu amaanay saaxiibadiis xulka qaranka England guushii ay ka gaareen Croatia – Gool FM
Harry Kane oo si weyn ugu amaanay saaxiibadiis xulka qaranka England guushii ay ka gaareen Croatia
(England) 18 Nof 2018. Xidiga reer England ee Harry Kane ayaa u arka in saaxiibadiis xulka qaranka saddexda libaax ay bixiyeen qaab ciyaareed cajiib ah kulankii UEFA Nations League ay dhawaan kula ciyaareen xulka qaranka Croatia.
Xulka qaranka England ayaa guul 2-1 ah kaga gaaray dhigiisa Croatia, wuxuuna Harry Kane carabka ku adkeeyay shaqsiyadii ay ku muujiyeen saaxiibadiis saddexda libaax kulankan inay sabab ugu noqotay in ay dib ugu soo laabtaan ciyaarta.
“Waxaan maanta muujinay shaqsiyad xoog leh, waxaan gaarnay guushii aan u qalanay, waxaan la kulanay xoogaa dhibaato ah, balse waan ka gudubnay”.
“Waxay ahayd xaalad cajiib ah, ma aanan ku arag garoonka Wembley xaaladan oo kale, waxaan dooneeenay in qof walba uu nagu faano, waxaan qabaa in qof walba uu ku raaxeysan doono guushan”.
Chelsea oo Wadnaha Farta ku heysa kaddib markii ay soo baxeen Warar sheegaya in Kante uu Wada hadalo la furay koox ay Coltamaan!!